Fenoarivo Atsinanana : nahazo simenitra sy fanitso ireo traboina | NewsMada
Fenoarivo Atsinanana : nahazo simenitra sy fanitso ireo traboina
Manao ranolava ny fanaterana fanampiana avy amin’ny fitondrana ho an’ireo traboina any Fenoarivo Atsinanana. Ny alarobia teo, tonga nitsapa alahelo ny fianakavian’ireo ankizy roa namoy ny ainy sy nanampy betsaka tamin’ny fikarakarana hatramin’ny fandevenana ireo delegasiona avy amin’ny minisiteran’ny Mponina. Nanome fanampiana toy ny simenitra 100 lasaka sy fanitso 100 takelaka ny filoham-pirenena izay nosoloin’izy ireo tena.
Nambaran’ny lehiben’ny faritra Analanjirofo fa savaranonando fotsiny izao, tsy ho ela ho tonga eto an-toerana ireo mpikambana avy amin’ny governemanta zanaky ny faritra hitsidika sy mbola hitondra fanampiana.
Raha ny fanadihadiana natao teto an-toerana, efa nitrangana haintrano ity faritra ity ny taona 2011 ary renim-pianakaviana iray no namoy ny ainy tamin’ izay. Mbola anisan’ ny niharan’ny haintrano fanindroany tamin’ ity tranga farany ity ihany koa, ilay raim-pianakaviana maty vady tamin’ izany. Nanambady fanindroany izy ka mbola niharan-doza ihany koa ny zanany kely sy ny vadiny. Ankoatra izay, misy itoviana avokoa ny endriky ny fisehoan’ny haintrano ny taona 2011 sy ity farany. Trano lehibe fa saingy mihoatra noho ny halehibeny ihany koa ny olona miara-monina amin’ ity trano niharam-boina ity. Efitra iray 4m x 3m ahitana olona efatra indray miara-mipetraka ao aminy. Saika mpianatra avy lavitra no monina ao.